SPAN Lab မှမထုတ်ဝေသော Porn လေ့လာမှုက Porn သည်တုန်လှုပ်နေသည်ကိုတွေ့သည် (မတ်လ၊ ၂၀၁၃) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
SPAN Lab ကအားဖြင့်အတည်မပြုရသေးသော Porn လေ့လာမှု Porn (မတ်လ, 2013) နှိုးဆွသည်ရှာပြီး
မှတ်ချက်များ YBOP: အောက်ပါ (၁) David Ley ၏မူရင်းဖြစ်သည် စိတ်ပညာယနေ့တွင် EEG လေ့လာမှုကိုထုတ်ဝေရန်မရှိသေးသော Nicole Prause အကြောင်း blog post နှင့် (၂) Gary Wilson ၏ စိတ်ပညာယနေ့တွင် ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကို၎င်းတုန့်ပြန်သည် (မတ်လ ၇၊ ၂၀၁၃ တွင်ထုတ်ဝေသည်) ။ Wilson ၏ post အောက်တွင် Wilson နှင့် Prause အကြားအပြန်အလှန်ဖလှယ်ခြင်းအပါအ ၀ င်ထင်မြင်ချက်များကိုသူတို့မူလထင်ထင်ရှားရှားဖော်ပြခဲ့သည်။ (Ley ၏ဤတူညီသောစာမူ၏လက်ရှိ version သည်သိသိသာသာပြောင်းလဲခဲ့သည်)
'Psychology Today' အယ်ဒီတာများသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်Aprilပြီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင်တင်ထားသောစာမူများကိုဖယ်ရှားလိုက်သည် နီကိုးလ် Prause ငါ၏အ post ကိုသူမ၏လေ့လာမှုအတုကြောင်းညည်းညူ။ Wilson က Prause လေ့လာမှုကို David Ley ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုသာမှတ်ချက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒါမမှန်ပါဘူး။ ဤသည်မှာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာရေးသားဖော်ပြမှု၏ပထမစာပိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ Prause လေ့လာမှုကိုအတည်မပြုရသေးသော၊ သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်ရ ဦး မည်မဟုတ်ဘဲဒေးဗစ်လီလေသာ၎င်းကိုလေ့လာခွင့်ရှိသည်ကိုသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ နီကိုးလ် Prause David Ley ရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုတည့်မတ်ပေးဖို့ဒါမှမဟုတ်လေ့လာမှုမိတ္တူတစ်စောင်ပေးဖို့တစ်လကျော်ကြာခဲ့တယ်။ သူလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူး။
Aprilပြီလ ၁၀ ရက်တွင် Prause သည် David Ley ၏ရာထူးအောက်တွင်ထပ်မံမှတ်ချက်ချခဲ့သည်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင်သူမကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည် လေ့လာမှုအသစ်။ လေ့လာမှုအသစ်၏အနှစ်ချုပ်ကိုဖတ်ပြီးသောနောက် Marnia Robinson သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲလမ်းစေသောညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများထက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုနည်းပါးကြောင်းရှင်းပြသည့်မှတ်ချက်တစ်ခုရေးခဲ့သည်။ Nicole Prause သည် Wilson ၏ post အောက်တွင်မှတ်ချက်ပေးခြင်းနှင့် Wilson ၏ blog post ကိုဖယ်ရှားရန်တောင်းဆိုရန် PT editors ထံအီးမေးလ်ပို့ခြင်းဖြင့်တုန့်ပြန်ခဲ့သည်။ ချီးမွမ်း လာမယ့်နှစ်ရက်ကျော် Wilson ကအီးမေးလ်ပို့ပါ, နှစ် ဦး စလုံးမည်သည့်အခြေစိုက်စခန်းမပါဘဲသူ့ကိုဥပဒေရေးရာအရေးယူမှုနှင့်အတူခြိမ်းခြောက်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ - Nicole Prause EEG လေ့လာမှုကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင်နောက်ဆုံး၌ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ YBOP ၏ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လေ့လာမှုကိုဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire မဟုတ်ဘဲ Hypersexuality, လိင်ပုံများအားဖြင့်ရူးနှမ်း Neurophysiological တုံ့ပြန်ချက်မှ Related ဖြစ်ပါတယ်.
ဇူလိုင်လ၊ 2013: Wilson ကသူ၏ဝေဖန်မှုကိုထုတ်ဝေပြီးရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပင် ၀ က်ဘ်၏လှည့်ကွက်များကိုတင်ရန် Prause သည်သုံးစွဲသူအမည်အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်.
သြဂုတ်လ 2013: ဂျွန်အေဂျွန်ဆင်ပါရဂူဘွဲ့သည် Prause ၏စွပ်စွဲချက်များကိုငြင်းဆိုခဲ့သည် သံမဏိ et al ။, 2013 ။ Prause retaliates ။
ဇန်နဝါရီလတစ်ဝိုက်၊ 2015: UCLA သည်နီကိုးလ်ပရာ့စ်၏စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခြင်းကိုမပြုလုပ်ခဲ့ပါ။
ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော - သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာတမ်းရှစ်ခုသည် YBOP ၏ဝေဖန်မှုနှင့်သဘောတူသည် သံမဏိ et al။ ၏အမှန်တကယ်တွေ့ရှိချက်များသည်စွဲလမ်းမှုပုံစံနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ၏ 8 သက်တူရွယ်တူ - ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှုများ သံမဏိ et al ။, 2013.
ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောနှင့်မြင့်တက်မှု Nicole Prause သည်ယနေ့အထိသူမအားဂယ်ရီ Wilson အားအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်.
ဇန်နဝါရီလ 29, 2019 - YBOP ကိုနှုတ်ပိတ်။ သူမ၏အမှားများကိုသက်သေပြရန်ကြိုးစားသည် Nicole Prause သည် YourBrainOnPorn နှင့် YourBrainOnPorn.com ရရန်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လျှောက်လွှာတင်သည်။ တရားစွဲမှုဆိုင်းငံ့ထား။
၂၀၁၁ ခုနှစ်အစောပိုင်း။ ။ သူမ၏ဖုံးကွယ်ထားသောအပြုအမူကိုဖုံးကွယ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင် Prause ကသူမကိုအသရေဖျက်သည့်တွစ်တာများစွာနှင့်ဖျက်ပစ်လိုက်သည်3အတုအယောင်နှင့်မအောင်မြင်, DMCA ယူ -down တင်သွင်းခဲ့သည် သူမ၏တွစ်တာ၏မျက်နှာပြင်များကိုဖယ်ရှားရန်။
၂၀၁၁ 2019ပြီလ - နီကိုးလ်ပရာ့စ်သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်သည့်ဆိုက်ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုငြင်းပယ်သူများ (www.realyourbrainonporn.com) မှပြုလုပ်သောကျူးလွန်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်ခြင်း၊ နှင့် ဆက်စပ် twitter အကောင့် သို့ နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေပျက်ခြင်း ညစ်ညမ်းသောသူကိုအန္တရာယ်ပေးနိုင်သည်။
နွေရာသီ, 2019: ဒါဝိဒ်သည် Ley ယခုယင်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမြှင့်တင်ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲခြင်းနှင့်လိင်စွဲလမ်းဒဏ္ဍာရီဖြစ်ကြောင်းသုံးစွဲသူများကစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန် porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီး xHamster နေဖြင့်လျော်ကြေးငွေခံရနေပါသည်!
Prause နှင့်သူမ alias twitter account ကြောင့်အနှောက်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုများပြားလာခြင်းကြောင့် (@BrainOnPorn) ၂၀၁၉ မှာဒီစာအုပ်ကိုငါတို့အတင်းအကျပ်ထုတ်ဝေခဲ့တယ် နီကိုးလ် Prause သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်သနည်း
ဒေးဗစ် LEY'S blog post အိုင်တီ Origins ထုတ်ဝေခဲ့ AS:
Pain on Brain - စွဲလမ်းစရာမကောင်းဘူး (မတ်လ ၆၊ ၂၀၁၃)
အဘယ်အရာကိုအာရုံကြောသုတေသနအမှန်မှာ porn ကိုအသုံးပြုဖို့သူကလူအကြောင်းကိုပြသ
အကြောင်းကိုခြဲ့ကားပွောတဲ့ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏရှိခဲ့သည် porn များစွာသောစာရေးဆရာနှင့် doomsayers porn ကြည့်ရှုသည့်အတွက်အန္တရာယ်များ neurochemical အပြောင်းအလဲများအစပျိုးလိုက်ခြင်းကြောင့်ဟုဆိုကာနှင့်အတူအသုံးပြု ဦးနှောက်။ သို့သော်အသစ်သုတေသန groundbreaking ကပဲဒါမဟုတျကွောငျးပြောပါတယ်များနှင့်ညစ်ညမ်း၏ပြဿနာသည်အသုံးပြုသူများနေသောလူမျိုးအမှန်တကယ်မြင့်မားတဲ့လိင်စိတ်, မသည်အဘယ်သူ၏ဦးနှောက်အတိုင်ပါပြီလူတို့နှင့်အတူလူဖြစ်ကြောင်းကို လိင် နှင့်ညစ်ညမ်း။
ကဲ့သို့သောလူကြိုက်များ antiporn ထောက်ခံသူတွေကို YourBrainonPorn နှင့်အုပ်စုဟုခေါ်တွင် The New မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်, porn စည်းမျဉ်းတစ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြဿနာမဟုတ်ဘဲအခမဲ့မိန့်ခွန်းကိစ္စကိုကြောင်းငြင်းခုန်။ ဤရွေ့ကားထောက်ခံသူတွေကိုမကြာခဏလျှင်လူများနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှသာ porn အသုံးပြုမှုကိုကိုယျ့ကိုယျကို၌၎င်း, ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းလက်လှမ်းအတွက်ကျနော်တို့ကထိန်းညှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်စေခဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုသိအခိုင်အမာ
မကြာသေးမီနှစ်ကျော်ကဤကြောက်ရွံ့ခြင်းသဘောသည်-based အငြင်းပွားမှုများမကြာခဏဦးနှောက်-related ပြောပြလိုပါသည်မြွက်နှင့်တူသောအသုံးအနှုန်းများန်းကျင်ပစ် dopamine စွပ်စွဲလွန်း porn စောင့်ကြည့်သူကလူများ၏ဦးနှောက်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုဖော်ပြဖို့ပြီးတော့ Activision နေတာနှင့် desensitization ။ ဦးနှောက်သိပ္ပံဤသည်နေ့ရက်ကာလပူဖြစ်ပြီး, အဲဒါကိုဒါ gosh-darned ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းနှင့်သိပ္ပံနည်းကျအသံကြောင့်၎င်း, အငြင်းပွားမှုများအတွက်ဦးနှောက်နှင့် neuroscience ပြောပြလိုပါသည်သုံးစွဲဖို့အာရုံကို-လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပြဿနာကိုအမှန်တကယ် porn ကိုအသုံးပြုပြီးလူများ၏ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူမှာကြည့်ကြောင့်အလွန်အမင်းနည်းနည်းသုတေသနနှင့်ညစ်ညမ်းမှစွပ်စွဲစွဲနေသောသူတို့ကိုများ၏ဦးနှောက်ကြည့်ရှုတော်မူကြောင်းကိုကောင်းသောအရာမ, စမ်းသပ်သုတေသနရှိခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ဤငြင်းခုံ၌ရှိသမျှသောသီအိုရီဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အပြောအဆို, အခြနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုရှင်းပြဖို့ကြိုးစားအခြားသုတေသနတွေ့ရှိချက်များလျှောက်ထားအပေါ်အခြေခံပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားဖွယ်, တိကျခိုင်မာစွာသစ်ကိုသုတေသနပြုယခုအမှန်တကယ်စွပ်စွဲလိင်စွဲများ၏ဦးနှောက်ကိုလေ့လာရာ, ပြုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ခန့်မှန်းခဲ့သလဲ အဆိုပါရလဒ်များအပြောအဆိုထက်နည်းနည်းကွဲပြားခြားနားပါသည်။ တကယ်တော့ရလဒ်ကြောင့်မထောက်ခံကြဘူး လိင်စွဲလမ်း မှန်ကန်သို့မဟုတ်အားလုံးကိုမှာမဆိုထူးခြားသောဦးနှောက်-related ပြဿနာများကိုထင်ဟပ်သည်။
သုတေသနအတွက်မကြာမီဂျာနယ်စိတ်ပညာ၏ Socioaffective အာရုံကြောသိပ္ပံထုတ်ဝေစေမည်အကြောင်း, စာရေးဆရာများသံမဏိ, Staley, Fong သည်နှင့် Prause သူတို့ porn အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ပြဿနာများရှိခဲ့ခံစားခဲ့ရသူတွေကို၏ဦးနှောက်ပေါ်အမြင်အာရုံ erotica ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့ EEG စမ်းသပ်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအပါအဝင် 52 လိင်စွဲ, သူတို့ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်ကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်း၎င်းတို့၏ဦးနှောက်ရဲ့လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှုလေ့လာခဲ့ရသည်။
လိင် စှဲမွဲမှု သီအိုရီသည်ဤလူတစ်ဦးချင်းစီ၏တွေနဲ့ကိုက်ညီဦးနှောက်ပုံစံများကိုပြသမယ်လို့ခန့်မှန်း ကိုကင်း မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတိကျစွာလျှပ်စစ်အပြောင်းအလဲများပြသသည်။ -
ကနေလိင်စွဲလမ်းအားပေးထောက်ခံသူတွေ, ရော့ Weiss သို့ Carnes ရှည်လျားသောလိင်နှင့်ညစ်ညမ်းဦးနှောက်ထဲမှာ "ကိုကင်းကဲ့သို့" ဖြစ်ကြောင်းစောဒကတက်ကြသည်။
သူတို့ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုကြည့်ရှုအားပေးအဖြစ် EEG ရဲ့အဲဒီတစ်ဦးချင်းစီမှအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်သောအခါမူကား, ရလဒ်များကိုအံ့သြစရာ ရှိ. , မဟုတ်မှာအားလုံးလိင်စွဲသီအိုရီနှင့်ကိုက်ညီ။ ကြည့်ရှုညစ်ညမ်းအမှန်တကယ် habituating (သို့မဟုတ် desensitizing), နဲ့တူခဲ့လျှင် မူးယစ်ဆေးဝါးများ ထို့နောက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုဦးနှောက်ထဲမှာမှိန်ဖျော့လျှပ်စစ်တုံ့ပြန်မှုရှိသည်မယ်လို့နေကြသည်။
တကယ်တော့ဤရလဒ်များကိုအတွက်မျှထိုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှုရှိ၏။ အဲဒီအစား, သင်တန်းသားများကို '' ခြုံငုံသူတို့နည်းတူ "သာမန်လူတွေက" ၏ဦးနှောက်နဲ့တူလေ့လာမှုများရာပေါင်းများစွာမှာပြခဲ့ပြီးပြသခဲ့ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်မှတိုးချဲ့လျှပ်စစ်ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုသရုပ်ပြခဲ့သည်။
ah ပေမယ့်လိင်စွဲလမ်းအားပေးထောက်ခံသူတွေကဤ porn စွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအားကောင်းတုံ့ပြန်မှုရှိသည်, သူတို့စွဲဖြစ်ကြသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကြောင်းငြင်းခုန်ပေလိမ့်မည်။ သူတို့ unfalsifiable ဖြစ်ကြောင်း, ၎င်းတို့၏သီအိုရီ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဆန့်ကျင်သောအရာတို့ကိုတင်ပြနှင့်ဒေတာများသို့မဟုတ်ရလဒ်များကိုသူတို့ရဲ့သီအိုရီမကိုက်ညီပါဘူးတဲ့အခါမှာရှင်းပြအလွန်အရည်အငြင်းပွားမှုများ, ရှိခြင်းအားဖြင့် - ဤ porn နှင့်လိင်စွဲသီအိုရီငြင်းခုန်ရန်ဒါခက်ခဲတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဤလေ့လာမှု၏စာရေးဆရာများအလွန်လိမ္မာပါးနပ်ခဲ့ကြသည်နေရာအရပ်ဖြစ်၏။ အဆိုပါသုတေသီများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသို့မဟုတ်လိင်စိတ်နဲ့သူတို့ကသင်တန်းသားများကိုအုပ်ချုပ်မေးခွန်းအတွက်လိင်စွဲလမ်း၏မျိုးစုံအစီအမံများ၏အစီအမံပါဝင်သည်။ ဤလေ့လာမှု၏ EEG ရလဒ်များကိုလိင်စိတ်၏အစီအမံဖွငျ့ဟောကိန်းထုတ်, နှင့်အာရုံကြောအစီအမံမှလိင်စွဲလမ်း၏အတိုင်းအတာများအကြားမကြားဆက်ဆံရေးရှိ၏ခဲ့ကြသည်။ တနည်းအားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုမှတိုးမြှင့်တုန့်ပြန်၏ EEG တွေ့ရှိချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏မြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်ရှိသည်သောလူများ၏တုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူတသမတ်တည်းရှိကြ၏။ ဤလေ့လာမှု၏စွပ်စွဲလိင်စွဲမြင့်မားတဲ့လိင်စိတ်ရှိသည်သောအခြားလူများ၏သူတွေကိုတူအောင်ကြောင့်ဦးနှောက်, အများရှိသော်လည်း, လိင်စွဲအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ကြပါဘူး။
ဒီခေတ်မီဆန်းပြားစိတ်ဖြာ၏နောက်ထပ်အစိတ်အပိုင်းသုတေသီများလိင်စွဲလမ်း / hypersexuality ၏ရှုထောင့်တိုင်းတာသောကွဲပြားခြားနားသောစမ်းသပ်မှုမှာကြည့်ရှုလျက်, လိင်စိတ်တိုင်းတာသောစာမေးပွဲများမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဤအစမ်းသပ်မှုရလဒ်တွေကိုမဆိုဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုအတွက်ခြားနားချက်နှင့်အတူတသမတ်တည်းကွဲပြားလျှင်၎င်းတို့သည်ထို့နောက်သိရှိနိုင်ဖို့စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တနည်းကား, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏စမ်းသပ်မှုဟာအာရုံကြောတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမဆက်သွယ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုသိသိသာသာသောအဘို့ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏သင်တန်းသားများကို '' အဆင့်အထိအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့ - တစ်ဦးပါဝင်သူလိင်စိတ်၏အဆင့်မြင့်အစီရင်ခံရသောအခါ, သူတို့ကလည်းသူတို့ကပြသခဲ့ကြသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှအပြောင်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဒီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းရှိသူအမြင်အာရုံ erotica မှလျော့နည်းတုံ့ပြန်မှုရှိသည်သောပြခဲ့ကြရာအချို့သောအခြားလေ့လာမှုများ, နှင့်ကိုက်ညီသည် - ဤသည်မြင့်မားသောလိင်စိတ်နှင့်အတူလူညစ်ညမ်းလျော့နည်းဝတ္ထုကိုရှာဖွေ, ဤသို့လျော့နည်းအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်းတစ်ဦးအတန်ငယ်အံ့သြစရာတွေ့ရှိချက်ခဲ့သည် ။ ဒါပေမယ့်ဒီလိင်စွဲဖို့ထူးခြားသောမရှိ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အဆင့်ဆင့်, မလိင်စွဲလမ်း၏ရောဂါလက္ခဏာများအားဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲရောဂါလက္ခဏာတွေမြင့်မားမှုနှုန်း, နေပါစေအသုံးပြုခဲ့ကြသည်လိင်စွဲသုံးခုအကြေးခွံများဖြစ်သော, သူတို့ကပြသခဲ့ခေါ်ဆောင်သွားဓာတ်ပုံများကိုဖို့အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုမှမကြားဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပါတယ်။
ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုကိုထောက်ခံအားပေးသူများသည်“ အေ့၊ ကြည့်ပါ၊ ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများသည်တုံ့ပြန်မှု ပို၍ နည်းသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်စွဲလမ်းသူများဖြစ်သည်။ သို့သော်သတိရပါ၊ ၎င်းသည်လိင်ပြproblemsနာများသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းမဟုတ်ဘဲအာရုံကြောဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကျဆင်းခြင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည့် libido အတိုင်းအတာဖြစ်သည်။ ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများ၏လေ့လာမှုအရတောင်မှလိင်စိတ်မတူကွဲပြားမှုများရှိသည်။ ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ညစ်ညမ်းမှုကိုထိန်းချုပ်တဲ့ပြproblemsနာမရှိတဲ့တခြားသူတွေလိုပဲဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုလျော့နည်းသွားတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားတာကပိုမိုမြင့်မားတဲ့လိင်ဆန္ဒပြင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်။ လိင်စိတ်နှိုးစက်မှုမြင့်မားသောလူများသည်အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော်လည်းညစ်ညမ်းမှုကိုတားဆီးရန်ပြproblemsနာမရှိပါ။
၎င်းသည်လေ့လာမှုတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုင်းတာနိုင်သည်ဟုငြင်းခုံနိုင်သည်။ Porn စွဲသူများအား MRI's၊ MEG's, SPECT Scan များသို့မဟုတ်အခြား ဦး နှောက်စကင်ဖတ်ခြင်းကဲ့သို့သော ဦး နှောက်လေ့လာမှုအမျိုးအစားများသည်၎င်းတို့ရှိယုံကြည်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပြသလိမ့်မည်ဟုသံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ အချို့သောသူများကမူအမြန်ဆုံးရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းသည်“ မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု” ကိုကြည့်ခြင်းနှင့်တစ်နည်းနည်းနဲ့ကွဲပြားသည်ဟုဆိုလိမ့်မည်။ ဤအငြင်းပွားမှုများတွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်မှာ၎င်းတို့သည်သူတို့၏သီအိုရီများသည်အမှန်တကယ်သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနသို့မဟုတ်ဒေတာများထက်တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပို၍ မှန်ကန်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရကြောင်းအခိုင်အမာပြောကြားခြင်းအားဖြင့်သိပ္ပံပညာ၏တရားဝင်မှုကိုဆန့်ကျင်။ ငြင်းခုံနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်၎င်းတို့သည်သူတို့၏သီအိုရီများကိုအတည်ပြုမှသာအချက်အလက်များကိုယုံကြည်နိုင်မည်လော။ ဒါဆိုရင်၊ စိတ်မကောင်းပါ၊ အဲဒါအတည်ပြုချက်လို့ခေါ်တယ် ဘက်လိုက်မှုမဟုတျဘဲသိပ္ပံပညာ။
ထင်ကြေးများနှင့် theorizing ဆန့်ကျင်အဖြစ်သိပ္ပံနည်းကျစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး၏တိုးမြှင့်အလေးချိန်, လိင်စွဲလမ်းသောသူတို့သည်အပြုအမူတွေလူမှုရေးနှင့်အတူပဋိပက္ခသို့လူတွေကိုဦးဆောင်လမ်းပြအထူးသဖြင့်အဖြစ်တစ်ဦးကွဲပြား Construction သည်မဟုတ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်လိင်စိတ်၏အဆင့်မြင့်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ၏အပြုအမူကိုရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းညွှန်ပြနေသည် လိင်န်းကျင်တန်ဖိုးများ။ အခြားမည်သည့်လူ့ဝိသေသလိုပဲ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒတစ်ဦးချင်းစီအပြောင်းအလဲ၏ကျယ်ပြန့်ပ္ပံနှင့်အတူတစ်ရောင်စဉ်တစ်လျှောက်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ Self-ဖော်ထုတ် porn နှင့်လိင်စွဲနေဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်ပြဿနာတွေနဲ့တိုင်ကြားချက်သည်ဤလူတစ်ဦးချင်းစီမထူးခြားတဲ့ရောဂါနှင့်အတူသူတို့၏မြင့်လိင်စိတ်ဖော်ပြသို့မဟုတ်လိုက်စားထားတဲ့အတွင်းအခြေအနေတွင်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိသည်။
porn နှင့်လိင်စွဲလမ်း၏အကြံပြုချက်ကိုထောက်ခံအားပေးသူများ porn နှင့်လိင်တိုက်ခိုက်ခြင်းကနေအများပြည်သူ / ပုဂ္ဂလိကလူမှုရေးတန်ဖိုးများနှင့်စံနမူနာတွေနဲ့ဆန့်ကျင်နိုငျပုံကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစကားရပ် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးမှုတိုးမြှင့်ဖို့, ၎င်းတို့၏တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုပွောငျးလဲစတင်ကောင်းသောအမှုကိုပြုလိမ့်မည်။ အဲဒီအစား porn များ၏စိုးရိမ်ရေမှတ် trumpeting ထက်, သူတို့အဘို့အငြင်းခုန်ဖို့ပိုပြီးထိရောက်တဲ့နှင့်အထောက်အထားအခြေပြုစေခြင်းငှါ ပညာရေး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်တာဝန်ရှိသည်နှင့်ထိုကွဲပြားမှုမှတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ဖို့တစ်ဦးချင်းနှစ်ဦးစလုံးဘို့လိုအပ်ကြောင်းများ၏ကွဲပြားအဆင့်ဆင့်တွေအကြောင်း။
ဂယ်ရီ Wilson'S စိတ်ပညာ TODAY အိုင်တီ Origins ထုတ်ဝေခဲ့ AS POST:
ဒါရိုက်တာဒေးဗစ်လိုင်က“ တိကျခိုင်မာသော၊ လိမ္မာပါးနပ်သော” လေ့လာမှုကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းမှုကိုအမှန်တကယ်လေ့လာခြင်း (သို့) စိတ္တဇပင်မပါ ၀ င်ခြင်းများကိုအသေးစိတ်ဝေဖန်သုံးသပ်ရန်မလိုဘဲတစ် ဦး တည်းလက်မခံကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ (လူသိရှင်ကြားမပြရသေးသောလေ့လာမှုတစ်ခုမှသူမည်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ကိုတ ဦး တည်းတွေးမိသည်။ )
မည်သည့်ကိစ္စတွင်, (ကရရှိနိုင်ဖြစ်လာလျှင်တည်းဖြတ်မူမှဘာသာရပ်) ဒီအံ့သြစရာလေ့လာမှုသူ၏ဖော်ပြချက်အပေါ်အခြေခံပြီးခုနှစ်, ဤနေရာတွင်အချို့သောသတိပေးလေ့လာတွေ့ရှိချက်နေသောခေါင်းစဉ်:
လီနီကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းခြင်းကိုယုံကြည်သောသူများသည်စွဲလမ်းမှုအားလုံးနှင့်အတူတူပင်အခြေခံ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟုပြောကြားသည် ထို့ကြောင့်ကိုကင်းသုံးစွဲသူနှင့်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများအကြား ဦး နှောက်တုန့်ပြန်မှုကွဲပြားမှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည့်မည်သည့်စမ်းသပ်မှုမဆိုညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုမရှိကြောင်းသက်သေသာဓကဖြစ်သည်ဟုသူကရှုမြင်သည်။
မဟုတ်ပါ။ ပထမ၊ www.yourbrainonporn.com တွင်“ ကိုကင်းစွဲလမ်းမှုသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်တူသည်” ဟုမဆိုလိုပါ။ ကိုကင်းတွင်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောသက်ရောက်မှုများရှိနေသောကြောင့်၎င်းသည်မိုက်မဲရာကျသည်။ ငါနှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်များစွဲဆိုသောအချက်သည်စွဲလမ်းမှုအားလုံးဖြစ်သည် ဝေစု ထိန်းအကွပ်မဲ့အသုံးပြုမှု compulsive ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးသောအလွန်တိကျတဲ့ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို။ အဆိုပါပြောဆိုချက်ကိုသောသူအပေါင်းတို့သည်စှဲ (ဓာတုနှင့်အမူအကျင့်) အခြေခံအကျဆုံးဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုဝေမျှ ယင်း၌ရှိကြ၏အများအပြားရာ၏ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုအခြို့သောအစုကိုရညျညှနျး limbic လက်ရှိလေ့လာမှုဆနျးစစျမပြုခဲ့သောဦးနှောက်၏ရှိရမည်။
သုတေသနဆယ်စုနှစ်များစွာအပြောင်းအလဲများကို shared ထားတဲ့ဦးနှောက်အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကရှိပြီးသားမျိုးစုံဦးနှောက်လေ့လာမှုများ-မဟုတ်မူးယစ်ဆေးစွဲ၏, ဒါပေမယ့်လည်းလောင်းကစားဝိုင်း, ဗီဒီယို-ဂိမ်းနှင့်အင်တာနက်စွဲရုံ၌ထလှည့်ပါပြီ။ မြင် မကြာသေးမှီကအင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှုဦးနှောက်လေ့လာရေး Porn Includeတစ်ယောက်တည်းထားတဲ့အင်တာနက်စွဲဦးနှောက်လေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေးစွဲတွင်တွေ့မြင်အားလုံးဖေါ်ပြခြင်းကဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို 20 မှလင့်များရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင်တွေ့မြင် စွဲလမ်းများအတွက်အဖြစ်များသည့်မော်လီကျူး Pathway ရှိပါတယ်?
ကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးပြောနိုင်သည်မှာ Ley ၏အံ့ study ဖွယ်ရာလေ့လာမှုသည်ထိုကောင်းမွန်စွာပြောင်းလဲထားသောမည်သည့်အရာများကိုမျှတိုင်းတာခြင်းမရှိပါ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲခြင်း (အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု) သည်ခိုင်မာစွာတည်ရှိသောစွဲလမ်းမှုစာပေများတွင်ခြွင်းချက်ဖြစ်သည်ဟူသောပြောဆိုချက်သည်သံသယဖြစ်ဖွယ် EEG လေ့လာမှုတစ်ခုထက်မကလိုအပ်သည်။ ဒီလေ့လာမှုကိုဘာကြောင့်သံသယဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်။
အခြားအစှဲအနေဖြင့်အမြင်အာရုံတွေကိုနှင့်အတူညစ်ညမ်းနှိုင်းယှဉ်ပျက်ကွက်: Porn ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါသည်
သင်တန်းသားများသည်ယေဘုယျအားဖြင့် 'သာမန်လူများ၏ ဦး နှောက်များကဲ့သို့' သူတို့၏ပြသထားသောရုပ်ပုံများကိုလျှပ်စစ် ဦး နှောက်တုန့်ပြန်မှုတိုးတက်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းမူးယစ်ဆေးတွေကိုသောသဘောအရတစ်ဦး cue မဟုတ်ပါဘူး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဝတ်လစ်စလစ်အလောင်းတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးမှနှိုးဆွသော, ဒါပေမယ့်ယောက်ျားများအတွက်အထူးသဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိပါသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည်စသည်တို့ကို, စိုက်ထူရန်နှင့်ဆက်စပ်သောမျိုးစုံစမ်းသပ်ချက်အတွက်နှစ်ပေါင်းသုက်ပိုးအရေအတွက်ကသုံးဆန့်ကျင်ဘက်မှာတော့ကင်း paraphernalia ၏ပုံရိပ်ယောင်များသာကင်းသည်အသုံးပြုသူများ / စွဲရန်နှိုးဆွနေကြသည်။
လိင်စိတ်နိုးထထုတ်လုပ်ရန်ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်ယောင်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသူတို့တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာ dopamine ခြီးမွှောဆိုလိုသည်။ (စင်စစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေးကိုလည်းဖြန့်ချိ dopamine ၏အဆင့်ဆင့်ထိခိုက်စေ။ ) အဲဒါကိုစွဲဖြစ်လာတဲ့သူတွေကိုအတွက်စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုများအတွက်ခလုတ်ဖြစ်ဟန်ရှိသောကြောင့်နာတာရှည် dopamine မြင့်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။
အစားအစာနှင့်လိင်နှစ်မျိုးလုံးသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်သဘာဝဆုကျေးဇူးများကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ သို့သော်မြေပြင်အမဲသားပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် dopamine မတိုးစေပါ။ အစာအာဟာရအမြင်အာရုံသည်သဘာဝဆုလာဘ်တစ်ခုအဖြစ်မှတ်ပုံတင်မထားပါ၊ အချည်းနှီးဖြစ်သောခေါ်ဆောင်သွားသည့်ပစ်မှတ်၏ပုံရိပ်အတိုင်းပင်။ Erotic ရုပ်ပုံလွှာများသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုနှိုးဆွပေးရုံသာမကဘဲ သူတို့ များမှာ အဆိုပါစွဲ porn စွဲသည်။ တိုတောင်းသောများတွင်ညစ်ညမ်းစွဲပြန်လည်နာလန်ထူက်ဘ်ဆိုက်များကြွယ်ဝပြည့်စုံနေချိန်မှာဘယ်အစာမျှ-ရုပ်ပုံစွဲပြန်လည်နာလန်ထူက်ဘ်ဆိုက်များတည်ရှိဘာဖြစ်လို့အသံကအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။
အမြင်အာရုံဆိုင်ရာ erotica သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောကြောင့်၊ ဤလေ့လာမှု၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရလိင်စိတ်နှိုးဆွသောပုံရိပ်များကိုနှိုးဆွခြင်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသူအချို့သည် ဦး နှောက်တွင်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်နွယ်သောအပြောင်းအလဲများပြုလုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုမည်သို့လျော့နည်းစေသနည်း။ မထားဘူး
porn ပိုမို arousal ၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုဖွစျစနေို စှဲမွဲမှု အများဆုံးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်မဟုတ်ဘဲယင်း၏မရှိခြင်း၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုပါ။ မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုမှာ ဘာစွဲ: အတွေ့အကြုံလိင်စိတ်နိုးထညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အစစ်အမှန်မဟုတ်ဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်စောင့်ကြည့်သည့်အခါခြားနားချက်စေသည်, ဂျာမန်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာပြဿနာဘာအသုံးပြုသူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ porn တုံ့ပြန်တိုးမြှင့် arousal နှင့်တဏှာ သာ. ကြီးမြတ်ပြဿနာ porn အသုံးပြုမှုကိုခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ သုတေသီများရလဒ်ကိုစွဲ၏အားဖြည့်မော်ဒယ်ကိုထောက်ပံ့သောကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။
ဂျာမန်လေ့လာမှုနှင့် Ley ၏လေ့လာမှုနှစ်ခုစလုံးကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်နေစဉ်နှိုးဆော်ခြင်းခံရကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အံ့အားသင့်စရာပါ။
အတွက်သူကပြောပါတယ်, တိုကျရိုကျ cortex arousal တ ဦး တည်း၏စွဲတုံ့ပြန်မှု ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်အစီအစဉ်၏အခြားဒေသများသည်နေ့စဉ်လှုံ့ဆော်မှုများကိုတုံ့ပြန်မှုနည်းပါးသော်လည်း၊ ပုံမှန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကြည့်ပါ အဘယ်ကြောင့်ငါတစ်ဦးကအဖော်သန်း Porn ပိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကိုရှာပါသလား? ထို့ကြောင့်သုတေသီများသည်ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းဆွဲထားသည့်တိုင်လေ့လာမှုတစ်ခုနှင့်အတူစွဲလမ်းမှုကိုမငြင်းနိုင်ပါ။
ဒါဝိဒ်သည် Ley ရေးသားခဲ့သည်:
"လိင် စွဲလမ်းမှုသီအိုရီအရဤပုဂ္ဂိုလ်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အရိပ်အယောင်များကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုတွင်လျှပ်စစ်အပြောင်းအလဲများကိုပြသသောကိုကင်းစွဲသူများနှင့် ဦး နှောက်ပုံစံများကိုပြသလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
တကယ်လား? သူကိုကပြောပါတယ်? ကိုကင်းနှင့်မတူဘဲ porn အသုံးပြုမှုလူ့လိင်စိတ်နိုးထနှင့်မိတ်လိုက်ရန်နှင့်ဆက်စပ်သောရှုပ်ထွေး circuitry တစ်ခုပင်အစုံပုတ်။ ဘယ်လိုနှစ်ခုလှုပ်ရှားမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း EEGs နှိုင်းယှဉ်ဖြစ်နိုင်မည်နည်း
Ley အတိုငျး, cue ဆွေးနွေးမှုမှခေတ္တပြန်လာရန်, သုတေသီများဓါတ်ပုံတွေကိုစောင့်ကြည့်ကင်းစွဲ၏ EEGs နှိုင်းယှဉ်လျှင် တွေကိုအဖြူရောင်အမှုန့်သို့မဟုတ်ကင်းသုံးပြီးလူတွေကိုကဲ့သို့ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်လိင်စွဲ၏ EEGs ရန်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်သူတို့အနေနဲ့အမှန်တကယ်စွဲမြားတှငျပါဝငျခွငျး၏လုပ်ရပ်နှင့်အတူစွဲတွေကိုကြည့်ရှု၏လုပ်ရပ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, သူတို့ကနှိုင်းယှဉ်၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ညီမျှဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားသည်။
porn စွဲများအတွက် တွေကို ကြည့်ရှု porn: တကယ်ကသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းအတွက်လုပ်ကြဖို့နိုင်ဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ-အားလုံးဖြစ်သေးငယ်လွန်းပုံငယ်များကိုမြင်လျှင်, အကျွမ်းတဝင် pornstar အမည်များကိုကွားလြှငျ, အကြိုက်ဆုံးညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များများအတွက်ကွန်ပျူတာ bookmarks ကိုမြင်လျှင်မည်အကြောင်းတည်း။
ဒုတိယအချက်ကြောင့်ယင်း၏အဆိပ်, ကင်း၏ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှဖြစ်ပေါ်စေသည် EEG ဖတ်ပွောငျးလဲသောနှောက် cortex ။ ဤရွေ့ကားစွဲလမ်းရာမှထတော်သောဦးနှောက်ကိုအပြောင်းအလဲများအပြင်၌ရှိကြ၏။ ထို့ကြောင့်, လိင်စွဲ၏ EEGs မှကိုကင်းစွဲ၏ EEGs နှိုင်းယှဉ်ရလဒ်များကို confounds ။ ဒါဟာအဆိပ်အတောက်တ္ထုများကို အသုံးပြု. မရသူသည်အခြားအမူအကျင့်စွဲ၏ဦးနှောက်နှင့်အတူပြဿနာ porn အသုံးပြုသူများအများ၏ဦးနှောက်ကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ပိုပြီးတာဝန်ရှိပါလိမ့်မယ်။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းကြည့်တာနဲ့တူမဖြစ် မူးယစ်ဆေးဝါးများ။ မူးယစ်ဆေးစွဲဟာပိုပြီးတစ်ခုစွဲဖြစ်ပါသည် တူညီတဲ့, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲသော်လည်းအသစ်အဆန်းရှာကြံဖို့စွဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုကင်းအသုံးပြုသူများသည်တစ်နှစ်အကြာတွင်ကင်းတစ်နှစ်သုံးနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်တစ်နှစ်အကြာတွင်တစ်ခုတည်းရုပ်ပုံတစ်နှစ်မှာကြည့်ကြဘူး။ သူတို့ဟာမကြာခဏသူတို့အားဗီဒီယိုများပြန်သွားဖို့ကိုတစ်ခုတည်း session တစ်ခုအတွက်မြောက်မြားစွာဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်ပုံရိပ်တွေမှတဆင့်ဘယ်တော့မှ run ။ တချို့ကအချိန်ကျော် porn ၏တစ်ခုလုံးကိုဝတ္ထုအမျိုးအစားများမှတဆင့်မြင့်လာ။
ရှိပါတယ်အတိုင်းဤအရေးပါခြားနားချက်, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများမှဆွေမျိုး porn အသုံးပြုသူများအထဲတွင်ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုပွောငျးလဲ တင်းကြပ်စွာ novelt များအတွက်သီးခြား dopamine ဆားကစ်y က။ ထိုသို့သောဆားကစ် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် activated ဒါပေမဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများက activated မခံကြလိမ့်မယ်။ ရလဒ်အဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကာလအတွင်းလျှပ်စစ်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းကိုက်ညီလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ဒါ့အပြင်အဲဒီမှာ built-in နေကြတယ်ဆိုတာကိုသတိရ မွတ်မပြေ တစ်မူးရူးနေစဉ်အတွင်းကျဆင်းနေ activation ဖြစ်ပေါ်စေသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများအတွက်ယန္တရားများ။ တစ်ဦးက porn အသုံးပြုသူဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်နေသမျှကာလပတ်လုံးသူသည်မိမိအကျိုးစီးပွားကိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ပူတစ်ခုခုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အဖြစ်တစ်မူးရူးနေစဉ်အတွင်းသုံးပြီးထိန်းထားနိုင်တယ်။ တနည်းအားဖြင့်လေ့လာမှုစာရေးဆရာများအသုံးပြုမော်ဒယ် porn ကိုက်ညီမည်မဟုတ်ပါ အသုံး.
ဤလေ့လာမှုသည်“ လိင်စွဲလမ်းသူ” လေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအကျင့်ဆိုးညစ်သောစွဲသူများနှင့်အနည်းငယ်သာသက်ဆိုင်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့ထောက်ပြကြသကဲ့သို့ လိင်စွဲလမ်းအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစွဲမဟုတ်ပါဘူး။ ယခင်မကြာခဏကလေးဘဝကိစ္စများမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနောက်ပိုင်းတွင်အပေါင်းတို့, အထက်, အင်တာနက်စွဲလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
လိင်စွဲလမ်းသူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသုံးနိုင်သည်၊ သို့သော်သူတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်လူများနှင့်လိင်ဆိုင်ရာပစ်မှတ်များအဖြစ်ပြုမူဆက်ဆံလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်အင်တာနက်ပေါ်မှငယ်ရွယ်သောအင်တာနက်စွဲလမ်းသူများနှင့်အလွန်ကွာခြားသည်။ ယနေ့ခေတ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းသူသည်အသက် ၂၀ နှစ်အရွယ်တွင်ရှိသေးသည်။ “ လိင်စွဲလမ်းသူ” အဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခံရရန်ရံပုံငွေမရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သိပ္ပံပညာရှင်များမည်သူ့အားစုဆောင်းခဲ့သည်၊
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်ကိုတာ ၀ န်ယူမှုရှိသော ဦး နှောက်လေ့လာမှုများသည်လူတို့၏နားလည်မှုကိုများစွာအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်လိင်စွဲလမ်းသူများမဟုတ်ဘဲအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများ (အထူးသဖြင့်အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစတင်ဖော်ပြသူများ) အပေါ်တွင်အခြေခံရမည်။ အများဆုံးပြင်းထန်လက္ခဏာတွေ) ။ လေ့လာချက်များအရပန်းများကိုစွဲလမ်းမှုနှင့်ရောမွှေမည့်အစား“ ပန်းသီးနှင့်ပန်းသီးတို့” ကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်လိုသည်။ ၎င်းတို့သည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေဆေးဝါးများ (ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်း) မှပြောင်းလဲထားသော EEGs များနှင့်နှိုင်းယှဉ်မှုများအားဖယ်ထုတ်ရန်နှင့်အမှန်တကယ်စွဲလမ်းမှုစံနှုန်းများကိုအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ D2 receptors or ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမူမမှန်.
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်“ Porn's Not Addictive” ခေါင်းစဉ်ကိုထောက်ပံ့ရန် Ley သည်နှိုင်းယှဉ်။ မရသော variable နှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်။ EEG လေ့လာမှုတစ်ခုထက်မကလိုအပ်သည်။ ဤသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်နှင့် DeltaFosB (the ။ ) အပေါ်မကြာသေးမီကလေ့လာမှု အားလုံးစှဲဖို့ဘုံမော်လီကျူး switch ကို) သုတေသနနှစ်ပေါင်းများစွာအကျဉ်းချုပ်။ ဒါဟာ DeltaFosB ၏စုဆောင်းခြင်းအားလုံးအမူအကျင့်များနှင့်ဓာတုစှဲစတင်ကြောင်းရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည်။ ထို DeltaFosB ၏စုဆောင်းခြင်းဆုလာဘ် circuitry dopamine ၏ spikes ခြင်းဖြင့်အစပျိုးသည်။ မြင် သဘာဝနှင့်ဆေးဝါးဆုလာဘ်တစ်ခု Key ကိုအာမခံအဖြစ်ΔFosBနှင့်အတူဘုံဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောပလပ်စတစ်ယန္တရားများအပေါ်ဥပဒေ (2013) ကိုလေ့လာမှုမှ:
"ထို့ကြောင့်သဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာဆုလာဘ်များသည်တူညီသောအာရုံကြောလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ပေါင်းစည်းရုံမျှမကမော်လီကျူးပြုသူနှင့်အတူတူပေါင်းစည်းခြင်းနှင့် NAc ရှိတူညီသောအာရုံခံဆဲလ်များရှိမက်လုံးမက်လွန်းမှုနှင့်အကျိုးကျေးဇူးနှစ်ခုစလုံးကို" လိုလားခြင်း "ကိုလွှမ်းမိုးရန်အလားအလာရှိသည်။ [မူးယစ်ဆေးနှင့်လိင်] ။
ဒါ့အပြင်တွေ့မြင် နျူကလီးယပ် Accumbens အတွက် DeltaFosB လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုကြေး၏သက်ရောက်မှုအားဖြည့်များအတွက်အရေးပါဖြစ်ပါသည် နိဂုံးချုပ်အရာ (2010), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှစ်မျိုးလုံး၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုသာမာန်ဆယ်လူလာသို့မဟုတ်မော်လီကျူးယန္တရားများကကြားဝင်ဖြန်ဖြေပေးသည်။
ရိုးရိုးလေး DeltaFosB ထားပါ ထိန်းချုပ်မှုမျိုးဗီဇစကားရပ် တူညီသောဆားကစ်အတွက်ဖြစ်ပေါ်သမျှသောစှဲ, အဘို့နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းကဲ့သို့တူညီသောအခြေခံဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများနှင့်အပြုအမူ, ဦးတည်သွားစေ။ အခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်းအပေါ်အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း, လူ့ဦးနှောက်ကိုလေ့လာမှုများ (အင်တာနက်ကို, အစာ, လောင်းကစားဝိုင်း) အားလုံးစှဲတူညီတဲ့အခြေခံဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို share အတည်ပြုခဲ့ကြသည်။
Gary Wilson ၏ ၂၀၁၃ ဘလော့ဂ်ပို့စ်မှမှတ်ချက်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ နောက်ဆုံးနှစ်ခုကိုကြည့်ပါ Nicole Prause နှင့် Gary Wilson တို့၏တုံ့ပြန်မှုအားဖြင့်တစ်ခု.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ဂယ်ရီ။ ဒါငါပဲ
Anonymous မှမတ်လ ၆ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၇း၀၀ နာရီတွင်တင်ပြခဲ့သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ဂယ်ရီ။ ဒါကငါပြောနိုင်တာပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏အလုပ်နှင့်အပ်နှံခြင်းသည်ထူးခြားသည်။
ငါ porn သူ့ဟာသူကြည့်ရှုခြင်းအတွက် cue နဲ့စွဲနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်နိုင်ပါသည် .. ညစ်ညမ်းများအတွက်တွေကိုသာစာညှပ်များ, ညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်အမည်များ, စသည်တို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သဘောမတူ။ ဒါ့အပြင်ကိုကင်းကိုအသုံးပြုပြီးအဖြူအမှုန့်နဲ့လူကြည့်ရှုသည်ဤနှစ်မျိုးလုံးအမြင်အာရုံအပြုအမူတွေသောသဘော porn ကြည့်ရှုအဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ညစ်ညမ်းသည့် cue နှင့်အပြုအမူနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်နိုင်ပါသည် Watch ။
"Visual အပြုအမူ" မဟုတ်ပါဘူး
“ Visual behaviors” သည်ဂုဏ်သတ္တိများကိုဆွဲယူရန်အတွက်သင့်တော်သောအစုံမဟုတ်ပါ။ ဒီမှာအချက်သူတို့ကိုအမြင်အာရုံဖြစ်ခြင်း၏ရဝုဏ်အပေါ်အခြေခံသည်မဟုတ်။
porn အကဲခတ်ပိုပြီး porn စောင့်ကြည့်ဖို့တစ် cue ဖြစ်ပေမယ့်ဒီနေရာမှာလုပ်ခံရသည့်ဂုဏ်ထူးမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ပါတယ်။ အဘယျသို့ဖွစျသညျအခြားလူကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကိုကင်းစှဲလမျးသူကိုကင်း porn ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ညစ်ညမ်းစှဲလမျးသူမှ analagous မဟုတ်ပါဘူးအသုံးပြုသည်။
Plus အားမူရင်းဆောင်းပါးထဲမှာလိင်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲအကြား abstraction ၏မရှိခြင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးယုတ္တိဗေဒကိုချွတ်ပစ်။
porn ကိုကြည့်ရှုခြင်းအတွက်စွဲလမ်းကိုယ်နှိုက် = ။
ကတင်ပြ ဂယ်ရီ Wilson က ၂၀၁၃ မတ် ၆ ရက် - ညနေ ၄း၄၅ ။
quote: porn သူ့ဟာသူကြည့်ရှုခြင်းအတွက် cue နဲ့စွဲနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်ကိုကင်းကိုအသုံးပြုပြီးအဖြူအမှုန့်နဲ့လူကြည့်ရှုသည်ဤနှစ်မျိုးလုံးအမြင်အာရုံအပြုအမူတွေသောသဘော porn ကြည့်ရှုအဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ညစ်ညမ်းသည့် cue နှင့်အပြုအမူနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်နိုင်ပါသည် Watch ။
နည်းပညာပိုင်းတစ် cue ဒါဟာ X တို့မှာအသုံးပြုနေခြင်းမရှိပါ X တို့မှာသုံးပြီး၏သတိလစ်သို့မဟုတ်သတိအမှတ်တရများကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်
ဆက်ဆက်, porn ကြည့်ရှုမတရားသောတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သင်က porn စောင့်ကြည့်ဖို့ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေပေမယ့်နေဆဲစွဲမြားတှငျပါဝငျခွငျးဖြစ်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီစက်ဝိုင်းလှီးရန်မကတခြားလမ်းလည်းမရှိ။
၂၀၁၃ မတ်လ ၇ ရက်နံနက် ၉း၄၆ အချိန် Anonymous မှတင်ပြသည်။
သငျသညျဂယ်ရီကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ့အသက်ကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပေါ် porn များ၏သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာလူများ၏လမ်းကြောင်းအပေါ်ကိုပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ အစစအရာရာအဆင်ပြေပါစေ!
ဝေဖန်အတွေးအခေါ်များအတွက်3မှုအတွက်ဂုဏ်ပြုကြပါစို့
ကတင်ပြ Travis Langley, Ph.D ဘွဲ့ကို မတ်လ ၈ ရက်၊
ဤအတွက်အခြေခံကျသောဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကိုအသုံးချခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒီစွပ်စွဲချက် "လေ့လာမှု" ဤမျှလောက်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရှိခဲ့ကွောငျးငါ့စိတ် boggles (သက်ပြင်းချ)
မစ္စတာ Wilson ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Tiago Guerra မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မတ် ၁၈ ရက်၊ ည ၈း၃၁ တွင်တင်ပြသည်။
မစ္စတာ Wilson ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အံ့သြစရာဝေဖန်ပြောဆိုမှုများ။
ကတင်ပြ နီကိုးလ် Prause, Ph.D ၂၀၁၃ Aprilပြီ ၁၀ ရက် - ၁း၅၄ နာရီ။
ကံမကောင်းစွာပဲအဲဒီစာရေးဆရာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်မှဝင်ရောက်ခွင့်မေတ္တာရပ်ခံဘယ်တော့မှဒါကြောင့်သူတို့ကအမှန်တကယ်ကပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ကဤဆောင်းပါးတွင်အတွက်သိပ္ပံအဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲမှားအောင်ကွာဟအမှားအယွင်းများအတော်များများစေပြီ။ ငါစာရေးဆရာများအားဖြင့်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယ၏မရှိခြင်းပေးထားသောဤဆောင်းပါးကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ဆက်သွယ်သူကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။
ယခုကြှနျုပျတို့သော်လည်း, ယခုမီဒီယာအတွက်သိပ္ပံပညာ၏မှားယွင်းစွာတင်ပြကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းဥပမာအတိုင်းဤသုံးပြီး, ဒါကြောင့်အခွင့်အလမ်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေကြသည်။
ကျနော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲကျနော်တို့ Ley ရဲ့ရာထူးကိုတုံ့ပြန်နေကြပါတယ်
ကတင်ပြ ဂယ်ရီ Wilson က ၂၀၁၃ Aprilပြီ ၁၀ ရက် - ၁း၅၄ နာရီ။
ငါတို့မတွေ့သေးသောသင်မထုတ်ဝေသောလေ့လာမှုကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့လွဲမှားစွာဖော်ပြနိုင်မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပို့စ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင် David Ley ၏ဖော်ပြချက်သာရှိသည်။
“ David Ley က“ တိကျခိုင်မာသော၊ လိမ္မာပါးနပ်သော” လေ့လာမှုကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းမှုကိုအမှန်တကယ်လေ့လာခြင်းသို့မဟုတ်အသေးစိတ်ကျသောဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များမပါ ၀ င်ဘဲတစ်ကိုယ်တည်းငြင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုသည်။ (လူသိရှင်ကြားမပြရသေးသောလေ့လာမှုတစ်ခုမှသူမည်သို့ရောက်ရှိလာသည်ကိုလူတစ် ဦး သိလိုသည်။ ) မည်သို့ပင်ဖြစ်စေဤအံ့ဖွယ်လေ့လာမှု၏ဖော်ပြချက်အပေါ် မူတည်၍ (၎င်းသည်ပြန်လည်ရရှိနိုင်ပါကပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုရှိလျှင်) ဤတွင်သတိပြုစရာအချို့ရှိသည်။
Dr. Prause, သင်သည်သင်၏လေ့လာမှု၏တိကျသောဖော်ပြချက်မဖော်ပြနိုင်ပုံရသောပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားခြင်းမရှိသော peer-reviewed လေ့လာမှုများကိုရွေးချယ်ထားသော 'Psychology Today' ဘလော့ဂါများထံထုတ်ဝေခြင်း၏သင်၏လေ့ကျင့်မှုကိုပြန်လည်စဉ်းစားလိုပေမည်။
၁။ ဘာကြောင့်မင်းလေ့လာမှုကို David Ley တစ်ယောက်တည်းအတွက်ပဲထုတ်ဝေခဲ့တာလဲ။ “ လိင်မှုစွဲလမ်းမှု၏ဒဏ္Myာရီ” ၏ရေးသားသူနှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုပြောဆိုသူတစ် ဦး အနေဖြင့်သူသည်အဘယ်ကြောင့်တစ် ဦး တည်းသောရွေးချယ်သူဖြစ်သနည်း။
၂။ David Ley ရဲ့လေ့လာမှုကိုဘာကြောင့်မပြုပြင်တာလဲ။ ဒါဟာတစ်လကျော်တက်ခဲ့ပြီး, သင်ပြီးခဲ့သည့်လကအပေါ်နှစ်ကြိမ်မှတ်ချက်ချပါတယ်။
၃) လွန်ခဲ့သောတစ်လက Ley ၏ post အောက်တွင်သင်မှတ်ချက်ပေးသည်။ ငါသည်သင်တို့၏လေ့လာမှုနှင့်ပတ်သက်။ သငျသညျကိုညွှန်ကြားတိကျတဲ့မေးခွန်းများကိုနှင့်အတူ, သင်မှတ်ချက်အောက်မှာမှတ်ချက်ချက်ချင်းငါတင်ခဲ့သည်။ ဒါကလေ့လာမှုကိုတုန့်ပြန်ရန်နှင့်သင်ကမ်းလှမ်းရန်အတွက်သင့်အခွင့်အရေးပဲ။ မင်းလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူး။ မင်းဒီမှာဘာကြောင့်မင်းကိုစွပ်စွဲတာလဲ။